यो समयमा सिनेमा ल्याउनु मेरा दर्शकको लागि हो : शिव श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता) – Avenues Khabar
२९ पुष २०७७, बुधबार ११:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं : कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै बन्द भएका सिनेमा घरहरु भोलि माघ १ गतेदेखि खुल्दै छन् । यससँगै एक नयाँ चलचित्र पनि प्रदर्शनमा आउने भएको छ । चर्चित अभिनेता शिव श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । चलचित्रको प्रदर्शनका बारेमा न्यूज एजेन्सी नेपालले सोधेको एक प्रश्नमा नायक एवं निर्माता श्रेष्ठले आफ्नो चलचित्रको प्रदर्शनले ठप्प भएको सिने क्षेत्र चलाएमान हुने बताए । अभिनेता एवं निर्माता श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश :
तपाईंलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाइ, यो विषम परिस्थितिमा सिनेमा लिएर आउनु भयो ….?
हो समय अलि फरक नै छ । तर आश्चर्य मान्नु पर्ने त्यस्तो पनि छैन । कोभिडको समयमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट काम शुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर हामी अगाडि आएका हौं । कलाकारले कला क्षेत्रबाट अगाडि आउने बेला हो यो । सिनेमा हेर्न शुरुमा दर्शक आउँदैनन् कि भन्ने डर हाम्रो टीममा पनि थियो । तर यो सिनेमाको प्रदर्शनले धेरै क्षेत्रको ढोका खोल्छ भन्ने लाग्यो । यसरी सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने देखेर हामीले प्रदर्शन गर्ने हिम्मत गरेका हौं ।
भिडियोमा हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ता :
जोखिम त छ । तर हामी मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट यहाँसम्म आएका हौं । म आफैं विगत ४० वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छु । जोखिम भन्दा पनि कर्तव्य सम्झेर पनि आएको हुँ ।
‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को कथाबस्तु उत्कृष्ट छ । मेरो छोरा शक्ति श्रेष्ठ र करिष्मा मानन्धरको छोरी कविता मानन्धरले अभिनय गर्नुभएको छ । हामी कलाक्षेत्रका ब्यक्तिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई दर्शक सामु ल्याएका छौं । यसमा पुराना र स्थापित कलाकारहरुले पनि अभिनय गर्नुभएको छ । सिनेमा कमर्सियल विधामा बनेको छ । खासमा गजब बनेको छ ।
यो समयमा सिनेमा ल्याउनु मेरा दर्शकको लागि हो । मलाई ४० वर्षदेखि दिएका माया र विश्वासलाई कर्तव्य सम्झेर पनि यो समयमा सिनेमा लिएर आएको हुँ । मलाई बनाएको दर्शकले हो, मैले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनुपर्छ । मेरो फिल्म हेर्न दर्शक हलसम्म आउनुहुन्छ । कोरोनाको कारण घर भित्र उकुस मुकुस भएर बस्नु भएका दर्शकलाई नयाँ ताजा सिनेमा दिएको छु ।
अन्तिममा,यो सिनेमाको प्रदर्शन सँगै सिने क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ के भन्नुहुन्छ ?
यो सिनेमाको प्रदर्शनसँगै बन्द भएका, रोकिएर रहेका कामहरु सुचारु गर्न बाटो खोल्छ । अब केहि गर्नुपर्छ चुप लागेर बस्नु हुन्न भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । साथै सिने क्षेत्रका प्राविधिक कलाकारहरुले काम पाउले वातावरण बन्छ । हामीले प्राविधिक कलाकारहरुलाई काम पनि दिनु छ । मैले पनि सिनेमाको प्रदर्शनपछि संकलन हुने केही रकम प्राविधिकहरुलाई सहयोग गर्नेछु । यस्तै अहिलेको अवस्था सृजना गर्न नेपाल सरकारले गरेको सहयोगलाई धन्यवाद दिन्छु ।
चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरे बोली: ‘संसद पुनस्र्थापना भए आन्दोलन गर्छु भनेकै छैन’
१० फाल्गुन २०७७, सोमबार १९:२३
विराटनगर: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चले…
संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवासमा
५ पुष २०७७, आईतवार ११:३१
१ चैत्र २०७६, शनिबार १२:१८
काठमाडौं : सेल्फी खिच्ने क्रममा गत फागुन…
काठमाडौं : नेपाली मुलका दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको टप १० मा छनोट भएका छन् । जोन डेनभरको चर्चित गीत…